विश्व नेता को कति अग्ला ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
किमले ढाँटे उचाइ
प्रकाशित मिति १८ बैशाख २०७५, मंगलवार ०८:३० लेखक नेपालीजनता
उत्तर र दक्षिण कोरियाली नेताबीच शुक्रबार सम्पन्न शिखर वार्ताको चर्चा अझै सेलाएको छैन । वार्ताका क्रममा दुई नेताको व्यक्तित्व र हाउभाउप्रति विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन् । उत्तर कोरियाली नेता किमले आफ्नो वास्तविक उचाइ ढाँटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
मुनको उचाइ ५ फिट ६ इन्च छ । पछाडि फर्काइएकोे ‘कुख्यात’ हेयर स्टाइलका बाबजुद किम मुनभन्दा धेरै होचा छन् । सीमावर्ती पानमुनजोममा किम र मुन सँगसँगै उभिएको तथा दायाँबायाँ भएर हिँडेका तस्बिरमा किम यसअघि दाबी गरिएभन्दा होचै देखिन्छन् ।
पछाडि फर्काइएकोे ‘कुख्यात’ हेयर स्टाइलका बाबजुद किम मुनभन्दा धेरै होचा देखिन्छन् । सीमावर्ती पानमुनजोममा किम र मुन सँगसँगै उभिएको तथा दायाँबायाँ भएर हिँडेका तस्बिरहरूमा किम यसअघि दाबी गरिएभन्दा होचै देखिन्छन् । दुवै कोरियाली नेताहरूले अग्लो हिल भएको जुत्ता लगाएका थिएनन् । किम जोङ उनको उचाइ उत्तर कोरियामा गौण विषय हो । किनकि किमका बाबु किम जोङ इल केबल ५ फिट दुई इन्च अग्ला थिए । इल आफू अग्लो देखिन हिल भएका क्युबामा बनाइएका जुत्ता लगाउँथे । किम जोङ उनको उचाइलाई लिएर कहिलेकाहीँ विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरूले पनि खिल्ली गर्ने गरेका छन् । केही महिनाअघि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्यक्तिगत गालीग्लोजमा उत्रिएका थिए । गत नोभेम्बरमा ट्रम्पले ट्विट गर्दै भनेका थिए, ‘बुढो भनेर किमले मलाई किन अपमान गर्छन् ? मैले उनलाई कहिल्यै पनि पुड्को र मोटो भनेको छैन ।’ उत्तर कोरियाले निरन्तर आणविक परीक्षण गरेपछि ट्रम्पले उत्तरका तानाशाहलाई ‘लिटिल रकेट म्यान’को संज्ञा दिएका थिए । किमजस्तै ट्रम्पमाथि पनि उचाइ ढाँटेको आरोप लागेको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्समा उल्लेख भएअनुसार ट्रम्पको उचाइ ६ फिट २ इन्च छ । तर, यसै वर्षको जनवरीमा गरिएको मेडिकल परीक्षणमा चिकित्सकले ट्रम्पको उचाइ ६ फिट ३ इन्च भएको बताएका थिए । ६ फिट १ इन्च अग्ला पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामासँगै खिचाइएका तस्बिरलाई तुलना गर्दा ट्रम्प चिकित्सकले दाबी गरेअनुसार अग्ला छैनन् । तर, अन्य विश्वनेताको तुलनामा ट्रम्प अग्ला नै देखिन्छन् । रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पनि सामान्य उचाइ छ । उनी ५ फिट ७ इन्च अग्ला छन् । उनी जर्मन चान्सलर एन्जिला मर्केलभन्दा केही अग्ला छन् । मर्केलको उचाइ ५ फिट ५ इन्च छ । अग्ला हिलमा सजिने बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको वास्तविक उचाइ ५ फिट ८ इन्च छ । अग्ला चप्पल र जुत्ता लगाउने सोखका कारण उनी निकै अग्ली देखिन्छिन् । एक अन्तर्वार्तामा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनले आफू जम्मा ५ फिट १० इन्च भएको बताएका थिए ।
गण्डकीमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद बिस्तारको तयारी
पोखरा । गण्डकी प्रदेशलाई बढीमा १२ मन्त्रालय बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ । ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई १० सदस्यीय बनाउन…
अब पार्टी एकताको अन्तिम बैठक हुन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको बैठकले पार्टी एकताका लागि अन्तिम वैठक हुने दावी गरेका…
शंखमूलस्थित शानदार मःमः सेन्टरमा आगलागी
काठमाडौं । बानेश्वरको शंखमूलस्थित एक होटलमा आगलागी भएको छ ।
शंखमूलस्थित शानदार मःमः सेन्टरमा ग्यास लिक भएर आगलागी भएको बताइएको…